M/weyne Shariif oo gaarey Adis Ababa, kulamana le leh madaxda IGAD. [Akhris …] – Radio Daljir
Luulyo 6, 2009 12:00 b 0
Adis Ababa, July 06 – Madaxweynaha Dawladda federaalka ah ee Somaliya Shariif Sh Axmed ayaa gaarey magaalada Adis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, halkaas oo uu ay iminka kulammo ay ugu socdaa.
Madaxweyne Shariif Sh Axmed oo ka yimid magaalada Sirte ee dalka Libya halkaas oo uu uga soo qeyb galey kulankii madaxda waddamada Afrika ay ku kulmeen ayaa waxaa uu soo marey dalka Jabuuti ka hor inta uusan tagin Adis Ababa.
Madaxweyne Shariif ayaa u jeeddada safarkiisa ee uu ku tagey magaalada Adis Ababa waxaa lagu sheegey in ay tahay in uu ka qeyb galo kulammo waddamada IGAD ay ku yeelanayaan magaalada Adis Ababa in uu uga codsado in la xoojiyo taageerada DFKMG iyo in waddamada deriska ah ay ka qeyb qaataan faragelin macquul ah in lagu sammeeyo Soomaaliya, taas oo ah in ciidammo waddamada deriska ka socda ay soo galaan Soomaaliya ku waas oo ay ku jiraan ciidamada Itoobiya.
Madaxweyne Shariif ayaa sidoo kale la sheegey Socdaalkiisa in uu ku aaddanyahay in uu ku dhiirrigeliyo waddamada Afrikaanka in ay Soomaaliya ay u soo diraan ciidammo nabad ilaalin ah ku waas oo ka qeyb qaata sii jiritaanka ciidammada DFKMG.
Shariifka ayaa ka hor inta uusan immaan Adis waxaa uu luggta soo marayey Jabuuti halkaasi oo uu kulan kula soo yeeshey Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, waxaana ay ka wada hadleen xaaladda dalka Soomaaliya iyo arrimaha sii cakirnaanayo ee faraha ka sii baxayo.
Wafdiga uu horkacayo Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah Ra’iisul Wasaare ku xigeenka ahna Wasiirka Maaliyadda Shariif Xasan Sh Aadan iyo Wasiirka Gaadiidka ee DFKMG Cali Jaamac Jangeli waxaana lagu wadaa in booqashadooda markii ay uga dhammaato Adis Ababa in ay lugta sii marayaan Caasimadda dalka Kenya magaalada Nairobi.
Masar oo soo bandhigtey qorshe ay ku dhexdhexaadineyso garab ka mid ah mucaaradka & dawladda Somaliya. [Akhris …]